Itch.io: GNU / Linux အထောက်အပံ့ဖြင့်ဗွီဒီယိုဂိမ်းများအတွက်ပွင့်လင်းသောစျေးကွက် Linux မှ
၏ဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူဆက်လက် GNU / Linux တွင်အသုံးဝင်သောဂိမ်းများ၊ application များနှင့် / သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဂိမ်းပလက်ဖောင်းများကျွန်တော်တို့ရဲ့အတည်ပြုခြင်းနှင့်သရုပ်ပြရန် အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း Operating Systems ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်အခြားသူများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့လည်းဤကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည် ချစ်သူ.
သေချာတာပေါ့ GNU / Linux များ နောက်ကွယ်မှဖြစ်နိုင်သည် Windows သို့မဟုတ် MacOS အချို့သောရှုထောင့်များရှိသော်လည်း၎င်းသည်နည်းပညာသို့မဟုတ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကဏ္ industries ၏စက်မှုလုပ်ငန်းများစိတ် ၀ င်စားမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဂိမ်းတွေကကနှင့်မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကန့်သတ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးထား GNU / Linux များ သို့မဟုတ်ထံမှထောက်ခံမှုမရှိခြင်း developer များသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူများ၏အသိုင်းအဝိုင်း။ ယခုအဘို့, ပေမယ့် Windows ကို ဤinရိယာ၌အငြင်းပွားဖွယ်မရှိသည့်လွှမ်းမိုးမှုကိုဆက်လက်ထားရှိရန်လည်းလိုအပ်သည် GNU / Linux များ ဒီinရိယာထဲမှာရှည်လျားသောလမ်းရောက်လေပြီ။
ဥပမာအားဖြင့်, အတွက် FromLinux ငါတို့အကြောင်းအများကြီးပြောခဲ့တယ် ရနှေးငှေ့တစ်ချိန်ကအချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို Lutris နှင့်မကြာသေးမီကအကြောင်းကို GameHub။ အခုတော့နောက်ထပ်လို့ခေါ်တဲ့နောက်ထပ်ကြီးစွာသောဂိမ်းအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု၏အလှည့်ပါ ချစ်သူ.
"Itch.io သည် indie ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုအဓိကထားသောလွတ်လပ်သောဒီဂျစ်တယ်ဖန်တီးသူများအတွက်ပွင့်လင်းသောစျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မည်သူမဆို၎င်းတို့ဖန်တီးထားသောအကြောင်းအရာများကိုရောင်းရန်ခွင့်ပြုသည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရောင်းသူတစ် ဦး အနေဖြင့်၎င်းသည်သင်မည်သို့ပြုလုပ်သည်ကိုသင်တာဝန်ယူသည်။ စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းနှင့်သင်၏စာမျက်နှာများကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ သင်၏ပါဝင်ခွင့်ကိုအတည်ပြုရန်အတွက်မဲ၊ အကြိုက်သို့မဟုတ်နောက်ဆက်တွဲရလဒ်များကိုသင်ဘယ်တော့မျှရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏အလုပ်ကိုသင်ကြိုက်သလောက်မကြာခဏဖြန့်ဝေသည့်နည်းလမ်းကိုသင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ Itch.io သည်ဝက်ဘ်ပေါ်တွင်သင်တွေ့ရှိနိုင်သောထူးခြားဆုံး၊ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောနှင့်လွတ်လပ်သောဖန်တီးမှုအချို့၏စုဆောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်ဒစ်ဂျစ်တယ်စတိုးမဟုတ်ပါ၊ များပြားလှသောအကြောင်းအရာများသည်အခမဲ့နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သင့်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုရန်နှင့်သင်တွေ့ရှိသည့်အရာကိုကြည့်ရှုရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။".
1.1 ပလက်ဖောင်း features
2 Itch.io အစားထိုး
2.1 GNU / Linux သို့မဟုတ် Multiplatforms တွင်
2.2 Windows အကြောင်း
၎င်းသည်ဖန်တီးသူများအားသူတို့၏အကြောင်းအရာများကိုမည်သို့ဖြန့်ဝေရမည်ကိုစမတ်ကျသောဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ကိရိယာများကိုပေးသည်။ တီထွင်သူများသည်အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်လူများဖန်တီးထားသည့်အရာများကိုမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ အများဆုံးပဲ့တင်ထပ်နေသည့်ဝန်များသို့မဟုတ်အာရုံစူးစိုက်မှုအရှိဆုံးသောလင့်ခ်များပေါ်ရှိအချက်အလက်များကိုလွယ်ကူစွာရရှိနိုင်သည်။
၀ ယ်ယူမှုနှင့်လှူဒါန်းမှုများအားလုံးကိုအနည်းဆုံးအထက်တွင်ပေးသည်။ သို့သော်အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းကိုသုည (အခမဲ့) အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်၊ သို့သော်သူကသူကမ်းလှမ်းသည်များကိုနှစ်သက်ပါကဖန်တီးသူကိုထောက်ခံရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်ဖြစ်နိုင်သည်။
ကြိုတင်မှာယူမှုများ၊ ဆုများရောင်းချခြင်း၊ စောစောစီးစီးကြည့်ရှုနိုင်သည့်အကြောင်းအရာများဖန်တီးခြင်း၊ သင်၏အကြောင်းအရာများကိုစုစည်းခြင်း၊
သင်၏ application ပေါ်တွင် Linux application ကို download လုပ်ပါ ဒေါင်းလုပ်အပိုင်း.
တွင်ရှိသော download လုပ်ထားသော package ၏ Terminal (Console) မှတဆင့်စီရင်ခြင်း ဖိုင်တွဲကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါcommand ကို အသုံးပြု၍ chmod +x Descarga/itch-setup && Descargas/itch-setup.
ကျန်တဲ့လျှောက်လွှာကို download လုပ်ပြီးစောင့်ဆိုင်းပါ။
ယခုမှစ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုလုံးကိုစူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပြီး ၄ င်း၏ရရှိနိုင်သည့်ဂိမ်းများကို ၀ ယ်ယူ ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။
မှတ်ချက်ဖြေ - အဲဒါကိုသတိရဖို့အရေးကြီးတယ် GNU / Linux အတွက်အခမဲ့ဂိမ်းများ ပြanyနာမရှိဘဲကြည့်ရှုခြင်း၊ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကစားခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။Linux ကိုဂိမ်းများ"။
GNU / Linux သို့မဟုတ် Multiplatforms တွင်
အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးကိုမည်သို့တန်ဖိုးထားနိုင်မည်နည်း GNU / Linux လည်ပတ်ရေးစနစ်များ လက်ရှိဖြစ်ကြသည် တရားဝင်သို့မဟုတ်ကစားရန်အရည်အချင်းပြည့်မီကွဲပြားခြားနားသောဂိမ်းများ ဂရပ်ဖစ်အရည်အသွေးတွေနဲ့ကျော်ကြားမှုအဆင့်ဆင့်ရရှိနိုင်ကမ်းလှမ်းမှု၌ရှိသကဲ့သို့အကြီးမဟုတ်ပါဘူးပေမယ့် Windows ကို.
သို့သော်လက်ရှိကက်တလောက်သည်အလွန်ကြီးမားသည်သာမကတစ်နေ့တာအတွင်းဆက်လက်တိုးပွားနေသည် အရေအတွက်နှင့်အရည်အသွေး။ ထိုအနေဖြင့်, စျေးကွက်ဝေစု GNU / Linux များ ဒီရိယာထဲမှာပိုပြီး ကုမ္ပဏီများနှင့် developer များ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပလက်ဖောင်းကိုစိတ်ဝင်စားပါလိမ့်မည် GNU / Linux များ သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်များအတွက်။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Itch.io»နောက်ထပ်ထူးခြားဆန်းကြယ်သောအွန်လိုင်းပွင့်လင်းပလက်ဖောင်းနှင့် app ဂိမ်းများ၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်အခမဲ့၊သို့ GNU / Linux များ နှင့်အခြား operating system ကိုပလက်ဖောင်းတစ်ခုလုံးကိုအဘို့, အလွန်ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Itch.io: GNU / Linux ကိုပံ့ပိုးမှုပေးတဲ့ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေအတွက်ပွင့်လင်းတဲ့စျေးကွက်